इम्बेडेड एससी फाइबर द्रुत कनेक्टर, चीन इम्बेडेड एससी फाइबर द्रुत कनेक्टर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना - क्विंगडाओ लागू फोटोनिक टेक्नोलोजी को।, लिमिटेड
होम>उत्पादन>FTTH श्रृंखला>इम्बेडेड एससी द्रुत कनेक्टर > उत्पाद विवरण
इम्बेडेड एससी फाइबर द्रुत कनेक्टर
फाइबर अप्टिक कनेक्टर, सामान्यतया फाइबर अप्टिक कनेक्टरको रूपमा चिनिन्छ, सामान्यतया फाइबर अप्टिक कनेक्टरको रूपमा चिनिन्छ। यो एक पुन: प्रयोज्य निष्क्रिय उपकरण हो जुन दुई फाइबरहरू वा केबलहरू जडान गर्न प्रयोग गरिन्छ एक निरन्तर अप्टिकल पथ बनाउँदछ। यो व्यापक रूपमा फाइबर ट्रांसमिशन लाइन र फाइबर वितरण फ्रेमहरूमा प्रयोग गरिएको छ। र अप्टिकल फाइबर परीक्षण उपकरणहरू र मीटरहरू सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने अप्टिकल निष्क्रिय घटकहरू हुन्।
१. अप्टिकल प्रदर्शन: फाइबर अप्टिक कनेक्टर्सहरूको अप्टिकल प्रदर्शन आवश्यकताहरूको लागि, सम्मिलन गुमाउने र रिटर्न नोक्सानको दुई सबैभन्दा आधारभूत प्यारामिटरहरू मुख्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
इन्सर्सन लॉस लिंकको प्रभावकारी अप्टिकल पावरको क्षय हो। थोरै सम्मिलित हुने घाटा, उत्तम। सामान्यतया, आवश्यकता ०.०dB भन्दा बढि हुनु हुँदैन। रिटरन लॉस (परावर्तन हानि) ले लिंक ऑप्टिकल पावरको परावर्तन दबाउन कनेक्टरको क्षमतालाई जनाउँछ, र यसको विशिष्ट मान २d डीबी भन्दा कम हुनु हुँदैन। कनेक्टरको वास्तविक अनुप्रयोगमा, पिनको सतहलाई विशेष गरी पालैपालो गरीन्छ रिटर्न घाटा ठूलो बनाउनको लागि हो, सामान्यतयाd0.5dB भन्दा कम हुँदैन।
२. अदला बदली, पुनरावृत्ति
फाइबर अप्टिक कनेक्टर एक विश्वव्यापी निष्क्रिय उपकरण हो। समान फाइबर ऑप्टिक कनेक्टरको लागि, यो कुनै पनि संयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र बारम्बार प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण, प्रस्तुत गरिएको अतिरिक्त घाटा सामान्यतया ०.२ dB भन्दा कम हुन्छ।
T. टेन्सिल शक्ति
राम्रो फाइबर अप्टिक कनेक्टरको लागि, टेन्सिल शक्ति सामान्यतया 90N भन्दा कम हुनु आवश्यक हुन्छ।